Ngaba ucinga ngokufunyanwa kweshishini? Cela inkxaso yezomthetho
Ukuba inkampani yakho yeyakho, ingasoloko ifikile ixesha apho ufuna ukumisa ukusebenza kwinkampani. Kwelinye icala, kunokwenzeka ukuba ufuna ukuthenga inkampani esele ikho. Kuzo zombini iimeko, ukufumana ishishini kubonelela ngesisombululo.
UKUZICHAZA OKANYE UKUZE UTHETHA ISHISHINI?
Ukuthengwa kweshishini yinkqubo eyinkimbinkimbi, enokuthatha ngokulula iinyanga ezintandathu ukuya kunyaka ukugqiba. Kubalulekile ke ngoko ukuqesha umcebisi wokufumana izinto, onokuthi akucebise kwaye akuxhase, kodwa akwazi nokuthatha imisebenzi kuwe. Iingcali kwi- Law & More izosebenza nawe ukumisela ezona ndlela zigqibeleleyo zokuthenga okanye zokuthengisa inkampani kwaye inokukunika inkxaso esemthethweni.
Imephu yendlela yokufumana ishishini
Nangona ukufunyanwa kweshishini ngalinye kwahlukile, kuxhomekeka kwiimeko zetyala, kukho indlela yendlela yomhlaba elandelwa xa ufuna ukuthenga okanye ukuthengisa inkampani. Law & MoreAmagqwetha aya kukunceda kuwo onke amanyathelo alesi sikhokelo ngenyathelo nenyathelo.
Inyathelo 1: Ukulungiselela ukufunyanwa
Ngaphambi kokuba ukufunyanwa kweshishini kwenzeke, kubalulekile ukuba uzilungiselele ngokufanelekileyo. Kwisigaba sokulungiselela, iimfuno zakho kunye nezifiso zenziwa. Oku kusebenza kuwo omabini amaqela afuna ukuthengisa inkampani kunye neqela elifuna ukuthenga inkampani. Okokuqala, kubalulekile ukumisela ukuba yeyiphi imisebenzi yeshishini inkampani ethengisa kuyo, ethengisa kuyo inkampani ethengisa kwaye ifuna ukufumana okanye ukuhlawula inkampani. Kuphela kuxa oku kucace gca, ukufunyanwa kungangqinwa. Emva kokugqitywa, ubume bezomthetho benkampani kunye nendima yomlawuli (s) kunye nabanini zabelo kufuneka ziphandwe. Kufuneka iphinde ichongwe ukuba ngaba iyinto enqwenelekayo ukuba ifunyanwe yenzeke kanye okanye ngokuthe ngcembe. Kwinqanaba lokulungiselela kubaluleke kakhulu ukuba ungazivumeli ukuba ukhokelwe ziimvakalelo, kodwa ukuba uthathe isigqibo esenziwe kakuhle. Amagqwetha at Law & More ndiza kukunceda ngale nto.
Inyathelo 2: ukufumana umthengi okanye inkampani
Nje ukuba iminqweno yakho ivewe ngokucacileyo, inyathelo elilandelayo kukujonga umthengi ofanelekileyo. Ukulungiselela le njongo, iprofayili yenkampani engaziwayo inokutsalwa, kwisiseko apho abathengi abafanelekileyo banokukhethwa. Xa umgqatswa ethe wafunyanwa, okokuqala kubalulekile ukusayina isivumelwano esingazichazanga. Emva koko, ulwazi olufanelekileyo malunga nenkampani lunokwenziwa ukuba lufumaneke kumthengi onokubakho. Xa ufuna ukuthatha inkampani, kubalulekile ukuba ufumane lonke ulwazi malunga nenkampani.
Inyathelo 3: Ingxoxo yokuhlola
Xa umthengi onokubakho okanye inkampani enokuthatha isikhundla ifumanekile kwaye amaqela atshintshiselana ngolwazi, lixesha lokuqala ingxoxo yokuhlola. Kuyinto eqhelekileyo ukuba ayisiyiyo kuphela umthengi kunye nomthengisi okhoyo, kodwa nabacebisi, abanemali kunye nabathengisi.
Inyathelo 4: uthethathethwano
Iingxoxo malunga nokufunyanwa kokuqalisa xa umthengi okanye umthengisi ngokuqinisekileyo enomdla. Kucetyiswa ukuba uthethathethwano luqhutywa yingcali yokufumana izinto. Law & MoreAmagqwetha angaxoxisana egameni lakho malunga neemeko zokuthatha kunye nexabiso. Nje ukuba kufikelelwe kwisivumelwano phakathi kwala maqela mabini, kuyabhalwa ileta enenjongo. Kule leta yenjongo, imigaqo kunye neemeko zokufunyanwa kunye namalungiselelo enkxaso-mali abekiweyo.
Inyathelo 5: Ukuzaliswa kokufunyanwa kweshishini
Phambi kokuba kugqitywe isivumelwano sokuthenga, kufuneka kwenziwe uphando ngenkuthalo. Ngokukhuthala okufanelekileyo ukuchaneka kunye nokugqibelela kwayo yonke idatha yenkampani kuyatshekishwa. Ukukhuthala okufanelekileyo kubaluleke kakhulu. Ukuba ukukhuthala okufanelekileyo akubikho ngenxa yezitenxo, isivumelwano sokuthengwa kokugqibela sinokutsalwa. Emva kokuba ukuhanjiswa kobunini kushicilelwe yi-notary, izabelo ziye zadluliselwa kwaye ixabiso lokuthenga lihlawulwe, ukufunyanwa kwenkampani kugqityiwe.
Inyathelo 6: intshayelelo
Ukubandakanyeka komthengisi kaninzi akupheli kwangoko xa ibhizinisi litshintshiwe. Kuhlala kuvunyelwana ukuba umthengisi wazise umntu oza kulandela kwaye amlungiselele umsebenzi. Ixesha eli lokuphumeza bekufanele ukuba lixoxwe kwangethuba ngexesha lothethathethwano.
Zininzi iindlela zokuxhasa ukufunyanwa kweseshishini, nganye ineenzuzo zayo kunye nezinto eziluncedo kuzo. Ezi zinto zinokwenzeka zokuxhasa ngezemali zinokudityaniswa. Ungaqwalasela ezi ndlela zilandelayo zokuxhasa ukuxhasa ishishini.
Iimali ezizezakho zomthengi
Kubalulekile ukuphanda ukuba ingakanani imali yakho onayo okanye ofuna ukuyifaka igalelo ngaphambi kokuba inkampani ifumane. Xa uziqhelanisa, kudla ngokuba nzima kakhulu ukugqiba ukufumana ishishini ngaphandle kokufaka iimpahla zakho. Nangona kunjalo, ubungakanani begalelo lakho kuxhomekeke kwimeko yakho.
Imboleko evela kumthengisi
Ngokuziqhelanisa, ukufunwa kweshishini kukwaxhaswa ngemali ngumthengisi ebonelela ngemali ebonakalayo ngohlobo lwemali mboleko kulowo uphumeleleyo. Oku kwaziwa njengemali mboleko yomthengisi. Inxalenye exhaswa ngemali ngumthengisi ihlala ingabi ngaphezu kwenxalenye ethengwa ngumthengi. Ukongeza, kuyavunywa rhoqo ukuba intlawulo iya kwenziwa ngezavenge. Isivumelwano semali mboleko siyenziwa xa isivumelwano semali mboleko kuvunyelwene ngaso.
Kuyenzeka ukuba umthengi athathe izabelo kwinkampani kumthengisi ngezigaba. Amalungiselelo okufumana imali anokukhethelwa oku. Kwimeko yamalungiselelo okuphuma, intlawulo ixhomekeke ekubeni umthengi afezekise iziphumo ezithile. Nangona kunjalo, eli lungiselelo lokuthatha ishishini libandakanya umngcipheko omkhulu kwimeko yeembambano, njengoko umthengi ekwazi ukuphembelela iziphumo zenkampani. Uncedo kumthengisi, kwelinye icala, kunokuba kukuhlawulwa ngakumbi xa kusenziwa inzuzo eninzi. Ngayiphi na imeko, kububulumko ukongamela ngokuzimeleyo kwintengiso, ukuthengwa kunye nembuyekezo phantsi kwesikim sengeniso.
(E) Abatyali mali abasesikweni
Ukuxhaswa ngemali kungathatha uhlobo lwemali mboleko kubatyali mali abasesemthethweni okanye abasesikweni. Abatyalomali abangahlelelekanga ngabahlobo, usapho kunye nabantu obaqhelileyo. Imali mboleko enjalo ixhaphakile ekufumaneni kweshishini losapho. Nangona kunjalo, kubaluleke kakhulu ukurekhoda ngokufanelekileyo imali evela kubatyali-mali abangahlelelekanga ukuze kungabikho kuqonda okungavisisani okanye iimbambano phakathi kwamalungu osapho okanye abahlobo.
Ukongeza, ukuxhaswa ngemali ngabatyali-mali ngokusesikweni kunokwenzeka. La ngamaqela anikezela ngokulingana ngemboleko mali. Umngeni kumthengi kukuba abatyali ngokusesikweni bahlala beba ngabanini zabelo zenkampani, ezibanika inani elithile lolawulo. Kwelinye icala, abatyali mali abasesikweni ngokufuthi banokuba negalelo kwinethiwekhi enkulu kunye nolwazi lweentengiso.
Indlela yokuxhasa ngezimali ethandwa ngakumbi kukufumana imali. Ngamafutshane, ukugcwala isihlwele kuthetha ukuba kwiphulo elikwi-intanethi, inani elikhulu labantu liyacelwa ukuba lityale imali ekufumaneni kwakho. Ukungancedi ukubuyiswa kwemali yezihlwele, nangona kunjalo, yimfihlo; Ukuqonda ukubuyiselwa kwemali, kufuneka ubhengeze kwangaphambili ukuba inkampani iyathengiswa.
Law & More iza kukunceda ekuphononongeni amathuba okuxhasa ukufunyanwa kweshishini. Amagqwetha ethu anokucebisa ngamathuba afanelekileyo imeko yakho kwaye akuncede ucwangcise imali.